झ्याल र भेन्डिलेटरबाट सरकारमा छिरेका छन्, आउदो चुनावमा सबैतिर जाली लगाइदिन्छौंः केपी ओली - Naya Online
झ्याल र भेन्डिलेटरबाट सरकारमा छिरेका छन्, आउदो चुनावमा सबैतिर जाली लगाइदिन्छौंः केपी ओली
शनिबार, भदौ १९, २०७८ (September 4th, 2021 at 4:52pm ) राजनीति
काठमाडौ, १९ भदौ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वस्थताका बाबजुद राजधानीमा आयोजित वृहत् कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरेका छन् ।
उक्त भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले नेपाल र चिनबिच कुनै सीमा विवाद नभएको र सरकारलाई सीमा विवाद कहाँ छ भनेर देखाउन चुनौती समेत दिएका छन् । सरकारलाई उनको प्रश्न थियो, ‘कसलाई खुसी पार्नका लागि चीनसँग सीमा विवाद छ भनेर समिति बनाउन प¥यो रे ? कसलाई खुसी पार्न ? यो सरकारलाई चुनौती दिन चाहन्छु यो समितिले कुनै ठाउँ सीमा विवाद देखाओस् ।’ उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनाउँदै लगेको पनि समेत लगाए ।
देउवा सरकारले कुनै रचनात्मक काम नगरी सबै कुरा बिगार्दै लगेको पनि आरोप लगाए । ‘रानी पोखरीमा ढुङ्गा हान्न सक्छन्, तपाईंहरु याद गर्नु होला । मूर्ति भत्काउन सक्छन् । यिनीहरूले रचनात्मक काम गर्दैनन् बिगार्दै मात्र गएका छन् ।’ त्यसैगरी एमसीसीको बारेमा पनि बोल्न प्रचण्ड र प्रम देउवालाई भनेका छन् । यो सरकारले कसैलाई सुख नदिने उनको भनाई छ ।
सरकारलाई कटाक्ष गर्दै ओलीले भने, ‘यिनिहरू सरकारमा पुगेका छन् । यिनिहरू सरकारमा पुग्ने जहिल्यै गठजोड गर्‍यो, षडयन्त्र गर्‍यो अनि झ्यालबाट, भेन्डिलेटरबाट छिर्‍यो ! आउदो चुनाबमा झ्यालमा, भेन्डिलेटरमा सबैतिर हामी जाली हाल्नेछौं यी छिर्न पनि पाउने छैनन् ।’